ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ရေခဲရေသောက်လို့ရလား............ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 02/02/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ရော ဗိုက်ထဲက ဘေဘီလေးကိုပါ ကျန်းမာစေချင်တာ မေမေတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးပါ။ ဆရာဝန်ကပြောတဲ့ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေကိုလည်း တသွေမသိမ်း လိုက်နာတာက မေမေရဲ့ အနှိုင်းမဲ့ မေတ္တာပေါ့။
ဒီလိုများကြားတဲ့အခါ ဘာကိုတော့ စားပေးပါ။ ဘာကိုတော့ မစားနဲ့၊ ရေကိုတော့ သောက်ပါ အယ်လ်ကိုဟောနဲ့ ကဖင်းပါတာတွေကို မသောက်ပါနဲ့ ဆိုတာမျိုး ပါနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ရေသောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အေးအေးလေးသောက်ချင်လို့ ရေခဲရေ သောက်လို့ရမလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က ပုံမှန်ထက် ပူနိုင်တာကြောင့် ရေခဲရေ သောက်ချင်တာ ရေခဲတုံးစားချင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ ရေခဲရေ သောက်လို့ရမလား ဆိုတာကို ဆွေးနွေးရအောင်လား……………
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေခဲရေ သောက်လို့ရလား………….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေခဲရေသောက်လို့ရပါတယ်။ သိပ်အေး မနေဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အာဟာရ လိုအပ်ချက်ရော ရေဓာတ်လိုအပ်ချက်ကိုပါ လစ်ဟာမှု မရှိဖြည့်နိုင်မှ မေမေရော ဘေဘီလေးပါ ကျန်းမာမှာဆိုတော့ ရေသောက်တာ ရေငတ်မပြေလို့ ရေအေးအေးလေး သောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ရေခဲရေ မအေးတာလေး သောက်လို့ရပါတယ်။
ရေခဲရေ သောက်တာ​ကြောင့် မေမေရော ဘေဘီလေးကိုပါ ထိခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေခဲရေအစား အချိုရည် အေးအေးလေး သောက်တာမျိုးတာ့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ အချိုရည်က မေမေ့ကျန်းမာရေးကိုရော ဘေဘီလေး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ရေခဲရေ သောက်ရင် မေမေ ဗိုက်အောင့်နိုင်တယ်ဆိုတာ တကယ်လား………………
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လရင့်လာလေလေ အစားစားတာ ရေသောက်တာတွေကို နည်းနည်းချင်းစီ နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ လုပ်ရပါတယ်။ အေးနေတဲ့ ရေကို တရစပ် မော့ချတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မေမေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတွေမှာလည်း ဗိုက်အောင့်တာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြောချင်တာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေခဲရေ သောက်တာကြောင့် မေမေ ဗိုက်အောင့်မယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆက မမှန်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေအနေနဲ့ အေးလွန်းနေတာမျိုးကိုတော့ မရွေးစေချင်ပါဘူး။
ရေခဲရေက အစာချေဖျက်မှုကို နှေးစေပြီး အူတွေရဲ့ အာဟာရစုပ်ယူနိုင်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထမင်းစားချိန်မှာတော့ ရေခဲရေမသောက်ပါနဲ့။ ရေခဲရေ သောက်တဲ့အခါမှာလည်း တစ်ခါတည်း အများကြီး မော့ချတာမျိုး မလုပ်ဘဲ ခွက်ထဲကို ထည့်လို့ နည်းနည်းချင်း သောက်ပေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေ ရေခဲရေ မသောက်ခင် သတိထားရမယ့် အချက်တွေ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အစစအရာရာ သတိထားရချိန်မို့ ရေခဲရေကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သောက်ချင်တိုင်းတော့ သောက်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ဝန် အခြေအနေနဲ့ ရေခဲရေ သောက်ဖို့ သင့်တော်ရဲ့လားဆိုတာကိုလည်း ဆရာဝန်ကို မေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကိုယ်ဝန်က ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အနေအထားမျိုး ဆိုရင်တော့ ရေခဲရေကို မသောက်တာက အကောင်းဆုံးပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ရေခဲရေသောက်ချင်ရင် သောက်လို့ရမလားဆိုတာကို ဆရာဝန်နဲ့ အရင်သေချာလေးမေးပါ။
ပုံမှန်ကတော့ သိပ်မအေးရင် ရေခဲရေ သောက်လို့ရတယ် ဆိုပေမယ့် အထိခိုက်မခံတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ကာလမှာတော့ သေချာလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။
Drinking Soft Drinks during Pregnancy – Is It Harmful? https://parenting.firstcry.com/articles/drinking-soft-drinks-during-pregnancy-is-it-harmful/ Accessed Date2June 2020
Is it safe to have cold water or beverage during pregnancy? A doctor clarifies https://indianexpress.com/article/parenting/nutrition/is-it-safe-to-have-cold-water-or-cold-drink-during-pregnancy-5888585/ Accessed Date2June 2020